Itoobiya oo sheegtay in gacanta lagu dhigay askarigii diley Gen Mekonnen – Radio Daljir
Juunyo 25, 2019 7:52 b 0
War kasoo baxay booliska Federalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in askarigii ilaalinayay taliyaha la dilay in hadda uu yaallo isbitaal lagana daweynayo dhaawac soo gaaray. Balse booliska ma aysan shaacin magaca askarigaas.
Ciidammada booliska Federaalka ee Itoobiya ayaa raalli gelin ka bixiyay hadal ay shalay sheegeen oo ahaa in askarigii lagu eedeeyay inuu dilay madaxii ciidammada dalkaas Gen Seare Mekonnen uu is toogtay.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa horraan sheegay in askariga uu dilay Janaraal Seare iyo sarkaal sare xilli ay joogeen gurigooda si loo afgembiyo hoggaanka maamulka Amxaarada.
Waa markii labaad oo warar kala duwan ay kasoo baxayaan arrinta ku aadan askariga lagu tuhunsan yahay inuu toogtay madaxii guud ee ciidammada Itoobiya.
Sabtidii dowladda Itoobiya waxay sheegtay in askarigaas la xiray halka Isniintii taliyaha guud ee booliska Endeshaw Tasew uu shaaca ka qaaday askarigaas uu is dilay markii uu toogtay Janaraallada.
Hase yeeshee illaa hadda makala cadda in dhaawaca soo gaaray askarigaas uu yahay mid isaga uu isku geeystay ama inuu dhaawacay qof kale intii uu weerarka socday.